Umambo hwaMwari—Kudzidza Bhaibheri Kunoita Kuti Uone Kubatsira Kwahunokuita
Pawaverenga nyaya dzapfuura ungangodaro waona kuti Zvapupu zvaJehovha zvinokoshesa kwazvo Umambo hwaMwari. Uye zvichida wafadzwa nezvikomborero zvichaunzwa neUmambo hwaMwari zvataurwa munyaya dzacho. Asi unganetseka kuti zvipikirwa izvozvo hazvisi kungorotawo zvako here.
Unofanira kuva munhu akangwarira pane kungobvuma zvose zvaunonzwa. (Zvirevo 14:15) Kungwarira kwako kunogona kuenzaniswa nekwevaBheriya vekare. * Pavakatanga kuudzwa mashoko akanaka eUmambo, vaBheriya vakagamuchira zvavakanzwa, kwete nemhaka yokungoti vaida kuti zvive zvechokwadi. Asi vakanyatsoongorora Magwaro kuti vaone “kana zvinhu izvi zvakanga zvakadaro.” (Mabasa 17:11) Tinogona kuti vaBheriya vakaenzanisa mashoko akanaka avakanga vanzwa nezvinotaurwa neMagwaro. Nokufamba kwenguva vakasvika pakugutsikana kuti mashoko akanaka avakanga vanzwa ainge akavakirwa paShoko raMwari.
Zvapupu zvaJehovha zvinokukumbira kuti uitewo saizvozvo. Kuburikidza neurongwa hwedu hwekudzidzisa vanhu Bhaibheri vasingabhadhari, tinokupa mukana wokuenzanisa zvinodavirwa neZvapupu zvaJehovha pamusoro peUmambo hwaMwari nezvinodzidziswa neBhaibheri.
Kuwedzera pakudzidza kwauri kuita nezveUmambo hwaMwari, kudzidza Bhaibheri kunogona kukubatsirawo kuwana mhinduro dzemimwe mibvunzo mikuru ine chokuita neupenyu.
Chinangwa cheupenyu ndechei?
Nei Mwari achibvumira kuti vanhu vatambure?
Chii chinoitika patinofa?
Chii chinoita kuti mhuri ifare?
Kupfuura zvose, kudzidza Bhaibheri kuchakubatsira ‘kuswedera pedyo naMwari.’ (Jakobho 4:8) Kana ukawedzera kuswedera pedyo naMwari, uchawedzerawo kuona kuti Umambo hwaMwari hunogona kukuitira zvinhu zvakanaka, kwete iye zvino chete asi nokusingaperi. Jesu pachake akanyengetera kuna Baba vake achiti: “Kuti vawane upenyu husingaperi, vanofanira kuramba vachiwana zivo pamusoro penyu, imi Mwari wechokwadi chete, uye pamusoro pouya wamakatuma, iye Jesu Kristu.”—Johani 17:3.
^ ndima 4 Bheriya yaiva guta raiva muMakedhoniya yekare.
Nei Umambo hwaMwari Huchikosha Kwaari?
Nguva pfupi yadarika mumwe musikana wemakore gumi anonzi Folake akanzi anyore rondedzero yechikoro yaiva nemusoro unoti, “Chinhu Chandinoda Kupfuura Zvose Pasi Pano.” Folake akasarudza kunyora pamusoro pezvinoita kuti ade kuudza vamwe nezveUmambo hwaMwari.
“Umambo hwaMwari ihurumende chaiyo,” akadaro Folake. “Asi haioneki, saka haugoni kuiona, kunyange kana ukapfeka magirazi!”
Folake akaenderera mberi achinyora nezvemakomborero eUmambo aanonyanya kutarisira. Akataura nezvematambudziko achapedzwa neUmambo achiti, “Zvinondisuwisa pandinoona vanhu vasina dzimba vachigara mumigwagwa” uyewo “vana vanofa nenzara munyika dzakasiyana-siyana.” Akatiwo, “Ndinofara zvakare pandinoverenga Isaya 65:21.” Ichitaura nezvevanhu vachava pasi pekutonga kweUmambo hwaMwari, ndima iyoyo inovimbisa kuti: “Vachavaka dzimba vogaramo; vachadyara minda yemizambiringa vodya zvibereko zvayo.”
Folake akati anotarisirawo kuzoona zvirwere zvose zvichibviswa naMwari achishandisa Umambo hwake. Murondedzero yake, akanyora mashoko aZvakazarurwa 21:4 anotaura kuti Mwari “achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipozve.” Anopedzisa achitizve kutaura nezvaJehovha neUmambo hwake ndicho chinhu chaanoda kupfuura zvose pasi pano. Zviri pachena kuti kasikana aka kanoda Umambo hwaMwari nemwoyo wose!